iOS 15 sy iPadOS 15 dia ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny 20 septambra | Vaovao IPhone
iOS 15 sy iPadOS 15 dia ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny 20 septambra
Angel Gonzalez | | iOS 15, About us
Apple dia nandefa ireo dikanteny saika azo antoka momba ny rafitra fiasa vaovao ora vitsy lasa izay. Ity no teboka farany izay mamarana ny vanim-potoana beta. Efatra volana izay izay nahafahan'ireo mpamorona nanaparitaka sy manatsara ny rafitra iray manontolo ary afaka nanoratra lesoka tamin'ny alàlan'ny programa beta ho an'ny daholobe ireo mpampiasa. Saingy, tapitra hatreo ny fiandrasana rehetra ary ny fiafaran'ity dia ny 20 septambra. Ity andro ity Apple dia hamoaka amin'ny fomba voafaritra sy ofisialy ny kinova farany an'ny iOS 15 sy iPadOS 15. Raha ny marina, ireo kinova izay napetraka aorin'izany dia ireo vokatra vaovao nambara omaly.
Tapitra ny fiandrasana: misy ny iOS 15 sy iPadOS 15 amin'ny 20 septambra
Apple dia nanambara izany iOS 15 sy iPadOS 15 dia hahita ny mazava amin'ny 20 septambra. Navoaka tamin'io andro io ny kinova farany ary azo havaozina amin'ny alàlan'ny iTunes na amin'ny alàlan'ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny tambajotra Wi-Fi mihitsy ireo fitaovana mifanaraka aminy.
Ny anjara asan'ny SharePlay dia tsy hahatratra ny kinova farany voalohany amin'ny iOS 15
iOS 15 no rafitra fiasa vaovao ho an'ny iPhone. Ny kinova vaovao izay, lavitra ny fandikan-dalàna, dia ahitana vaovao mahaliana izay azontsika notsapaina tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ny sasany amin'izy ireo dia ny fanavaozana sy fanavaozana ny Safari, ny fampidirana audio spatial amin'ny fomba ankapobeny ao amin'ny rafitra, ny fomba mikrô vaovao, ny safidy hanombohana ny FaceTime amin'ny alàlan'ny rohy, ny fomba fifantohana vaovao ary ny snsetera lava. Fitaovana mifanentana dia:
Ho setrin'izany, iPadOS 15 koa dia nampiditra fiasa lehibe. Ny sasany amin'izy ireo dia multitask amin'ny alàlan'ny teboka telo any ambony, ny fahatongavan'ireo widgets amin'ny efijery an-trano sy ireo fiasa mahazatra maro hafa miaraka amin'ny iOS 15 toy ny SharePlay na ireo fiasa vaovao rehetra ao amin'ny FaceTime na Messages. Fitaovana mifanentana dia:
12,9-inch iPad Pro (taranaka faha-5)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » iOS 15 sy iPadOS 15 dia ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny 20 septambra
Apple dia namoaka kinova RC an'ny iOS 15, iPadOS 15 ary watchOS 8